बजेटबारे के भन्छ प्रतिपक्षी कांग्रेस ? «
बजेटबारे के भन्छ प्रतिपक्षी कांग्रेस ?
आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट निराशाजनक भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै कांग्रेसले बजेटले अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह ल्यउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको हो । बजेट भाषण सुनेर बाहिरिँदै गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेटले थप बोझ बढाएको बताए । “यो सबै बेकारको कुरा हो । बजेट आयो, बोझ बढाएर गयो । कर बढाएर उत्पादकत्व बढाउछु भन्ने हावादारी हो,” देउवाले भने ।
कांग्रेसकै सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले बजेट दिउँसै सपना देखाउने खालको भएको बताए । बजेट ’दिउँसै सपना देखाउने’ जस्तो बनेको उनको प्रतिक्रिया थियो । १७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिए पनि त्यसलाई केन्द्रले उठाउने या प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनले बताए । कांग्रेसका सांसद गगन थापाले पनि बजेटले उत्साह नथपेको बताए । बजेटमा कतैबाट पनि उत्साहित हुने ठाउँ देखिँदैन,” सांसद थापाले भने, “प्रधानमन्त्रीले बजेटसम्म हेर्नुस् म के गर्छु भनेर देखाउँछु भन्नुभएको थियो, एक प्रकारले जोखिमको अपेक्षा गरेको थिए । तर, त्यस्तो कुनै देखिएन ।”
राजनीतिक नाराबाट प्रभावित
निर्वाचनका बेलामा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रलाई मैले सपनाको पुलिन्दा भनेको थिएँ । त्यो एउटा सपिङ लिस्ट थियो । कतिपय अवस्थामा बजेट त्यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । वितरण नगर्ने भन्दाभन्दै पनि बजेटमा २५ अर्ब रुपैयाँ जति विभिन्न शीर्षकमा बाँडिएको छ । त्यसकारण बजेट राजनीतिक नाराबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको विकासका लागि सरकारीका अतिरिक्त निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले आयकरमा नयाँ दरको प्रस्ताव गरिएको छ । २० लाख भन्दा धेरै करयोग्य आय भएकालाई थप कर लगाउने भनिएको छ । यसले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्दैन । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने धेरै कुरा बजेटमा आएका छन् । कृषिको अवस्था कस्तो हुन्छ त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई निर्धारण गर्छ । चालु वर्षमा धानको उत्पादन कम भएको छ । अर्कोतर्फ तयारी अवस्थामा नरहेका आयोजनामा बजेट हालिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गलाई ३ अर्ब छुट्याइएको छ । । त्यो आयोजना यो वर्ष पूरा हुन्छ ? कृषिको उत्पादकत्व ५ वर्षमा दोब्बर बनाइने भनिएपनि सम्भव छैन ।
बजेट निराशजनक, लगानी आकर्षित गर्दैन
सहमहामन्त्री, नेपाली कांग्रेस
आर्थिक वर्ष ०७५/७६को बजेट निराशजनक छ । यसले अर्थतन्त्रमा कुनै उत्साह सञ्चार गर्न सक्ने देखिँदैन । नीति तथा कार्यक्रममा भनेका कुरा पनि बजेटमा समेटिएको छैन । चुनावी घोषणापत्रमा भनिएका र बाँडिएका सपनाको त नजिक पनि पुगेको छैन । चुनावमा जनतालाई जे आश्वासन दिएर मत मागिएको थियो, ती जनतालाई यो बजेटले निराश बनाएको छ । चुनावको बेलामा जे भनिएको थियो त्यो पूरा भएन । वृद्धभत्ता ५ हजार बनाउने भनेर उहाँहरूले चर्को स्वरमा भन्नुभयो । तर, अहिले वृद्धभत्ता बढाउनेबारे बजेट मौन छ । कृषि उत्पादन र पर्यटक दोब्बर बनाउने भनिएपनि त्यसको ठोस कुनै आधार बजेटले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । निजगढ विमानस्थल प्राथमिकतामा छैन । कहाँबाट आउँछन् पर्यटक ? ७ लाख विना धितो बेरोजगारलाई दिने भनिएको छ । विगतमा स्वरोगार कोषका नाममा कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने काम भएको थियो । त्यस्तै यो पनि पैसा बाँड्ने कार्यक्रम हो । जनता आवास कार्यक्रमका नाममा प्रत्येक घरलाई ५० हजार दिने कुरा गरिउको छ । यो पनि आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्ने तयारी हो । करिब १२ लाख आवासविहनिलाई यो कार्यक्रमले खासै उपलब्धी हासिल हुने देखिँदैन । विदेशी र स्वदेशी लगानी आकर्षित गर्न वातावरण चाहिन्छ । त्यस्तो वातावरण बनाएर लगानी वृद्धि गर्ने कुनै कुनै आधार बजेटले दिँदैन ।
बजेटले नियमित कर तिर्नेमाथी थप भार थपेको छ । तर, करको दायरामै नआएकाहरूलाई दायरामा ल्याउन सकेन । बजेटले नीजि क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा करिब ७८ प्रतिशत योगदान गर्ने निजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने कुनै कार्यक्रम छैन ।संघीय संरचनामा देश गएको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यलाई प्रष्ट गर्न सकेका छैन ।
हात्ती आयो फुस्सा !
प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
आफूलाई शक्तिशाली बताउँदै आएको सरकारले ल्याएको आर्थीक वर्ष ०७५/७६ को बजेट हेर्दा खासै केही देखिएन । बजेट आउनु अघि के के नै आउला जस्तो ठ्ूलो हो हल्ला गरिएको थियो । तर, बजेट हेर्दा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा !! जस्तो मात्र छ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुभएका तत्कालिन एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्र लिएर निर्वाचनमा जानुभयो । चुनावमा वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि सपनाका चाङ बाँडिएको थियो । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा नागरिक तहमा थियो । तर, चुनावमा बाँडिएको सपना र घोषणापत्र, केही समय अगाडि जारी गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जारी बजेटबीच तादाम्यता टुटेको छ । ‘निजी क्षेत्र र राष्ट्रसेवक बाहेकलाई निराशाजनक नै त नभनौं तर सपना, प्रचार र होहल्ला ठूलो छ । परिणाममा भने यो बजेट हात्ती आयो फुस्सा !!’जस्तो भएको छ ।